Rooble oo la kulmay Taliyeyaasha Booliska iyo AMISOM | KEYDMEDIA ONLINE
Kulankooda ayay uga hadleen arrimo badan oo ay kamid yihiin, fududeynta iyo amniga doorashada aqalka sare ee Somaliland oo toddobaadkan bilaabaneysa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha xukumadda Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta la kulmay Taliyaha booliska Soomaaliya, taliska booliska AMISOM iyo guddiga doorashooyinka gobollada woqooyi.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa faray saraakiisha kala duwan ee ciidamada, inay dardar geliyaan howlaha sugida amniga doorashooyinka Aqalka Sare ee gobolada Waqoogi.
Berri oo ah Isniin ayaa la filayaa in musharraxiinta Aqalka Sare ee Somaliland ay jeediyaan khudbadahooda, doorashada 11-ka senatar ee Aqalka Sare gobolada Waqooyi ayaa socon doonta, muddo saddex cisho oo ka bilaabata maalinta Talaadada oo ku beegan 28-ka bishan illaa Khamiista 30- bishan.
Ciidamada Booliska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa sugi doona ammaanka goobta ay ka dhici doonto doorashada xubnaha Aqalka sare ee Somaliland.